Personal Computer | MYANMAR UNICODE® MIGRATION
မေး - Windows ကွန်ပျူတာမှာ ဘယ်လိုသုံးရသလဲ?
Windows 8 ကစပြီး ဖောင့်နှင့် Keyboard လက်ကွက်ထည့်စရာလိုဘဲ သုံးလို့ရပါတယ်။ သင်ပုန်းကြီး သတ်ပုံအတိုင်းစာရိုက်ချင်ရင်တော့ Keyman သို့မဟုတ် Keymagic Keyboard software တခုခုထည့်သုံးရပါမယ်။ Windows 10 April Update မှာလည်း သင်ပုန်းကြီး သတ်ပုံအတိုင်း စာရိုက်နိုင်တဲ့ လက်ကွက်ပါဝင်လာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိနှစ်သက်ရာဖောင့်ကိုလည်း ထည့်သွင်းသုံးစွဲ နိုင်ပါတယ်။ Windows7သုံးစွဲသူအနေဖြင့် ဖောင့်နှင့် keyboard လက်ကွက်ထည့်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။
မေး - ဘယ်ကီးဘုတ် လက်ကွက်ကိုသုံးစွဲရမလဲ? ဘယ်ဟာကစံလက်ကွက်ဖြစ်ပါလဲ?
ကီးဘုတ်လက်ကွက်ကို နိုင်ငံတကာစံ သတ်မှတ်ချက်တော့ မရှိသေးပါဘူး။ Myanmar3 လက်ကွက်ကိုတော့ Local စံတခုအဖြစ် သုံးစွဲ နေကြပြီဖြစ်ပြီး Microsoft မှထုတ်လုပ်လိုက်သော မြန်မာလက်ကွက်သည်လည်း Myanmar3 လက်ကွက်အတိုင်း ဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်။
မေး - ဘယ်ဖောင့် ဘယ် Keyboard လက်ကွက်တွေ သုံးရမလဲ?
Smart Phone ဖြစ်ဖြစ်၊ PC ကွန်ပျူတာဖြစ်ဖြစ် မူလပါလာပြီးသား ဖောင့်နှင့်လက်ကွက်ကို အသုံးပြုနိုင်သလို၊ မိမိနှစ်သက်ရာ ကိုလည်း ထည့်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ- Samsung, ASUS ဖုန်းတွေမှာ လက်ကွက်ပါပြီးသား ဖြစ်ပေမယ့် PlayStore က Google Gboard ကိုလည်း ထည့်သွင်းသုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာတွေအတွက်လည်း မူလပါပြီးသား စနစ်များအပြင် Padauk Font, Pyidaungsu Font, Google Myanmar Font များကိုသုံးစွဲနိုင်သလို Keyman, Keymagic Keyboard လက်ကွက်များကိုလည်း သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
မေး - ကွန်ပျူတာက Chrome, FireFox Browser တွေမှာ စာမမှန်ဘူး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
Content font setting ကို ဇော်ဂျီတမျိုးတည်း သတ်မှတ်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ မူလ font setting (default)ပြန်ထားပေးပါက မှန်သွားပါလိမ့်မယ်။
မေး - ကွန်ပျူတာက Browser တွေမှာ ယူနီကုဒ်ရော ဇော်ဂျီပါ ၂မျိုးစလုံး အမှန်ပေါ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
Font tagger Extension သို့မဟုတ် MUA Extension တခုခု ထည့်ထားရင် ၂မျိုးစလုံး အမှန်မြင်ရနိုင်ပါတယ်။ Google က ရှာဖွေပြီး ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။